Izinganekwane zaseSeville, kusuka lapho kwaqala khona imigwaqo yayo kuya ePedro el Cruel | Izindaba Zokuhamba
Luis Martinez | 22/04/2021 13:02 | Cultura, Sevilla
ISeville yindawo ekahle yabathandi bamasiko, ngaphezu kokungapheli izinhlelo ongazenza edolobheni, izindaba zabo nezinganekwane zabo ziningi njengoba zinhle futhi ziyamangaza. Qaphela ukuthi imvelaphi yayo ibuyela okungenani edolobheni laseRoma i I-Hispalis Isungulwe ngu UJulius Khesari ngekhulu lokuqala BC.
Njengokungathi lokho kwakunganele, idolobha lase-Andalusiya lajabulela amandla amakhulu ngezikhathi zangenkathi ephakathi, lapho laphindwa laphindwa ngabanumzane baseCastilian ngemuva kokunqotshwa futhi UFerdinand III oNgcwele ngo-1248. Futhi ikakhulu esikhathini se- I-Austrias, lapho iba yitheku lokuqala lokuhweba neNew World kanye nesikhungo sezomnotho sombuso waseSpain. Umlando ocebile onjalo bekufanele ukhiphe izindaba eziningi ezinganekwane. Ngakho-ke, uma ufuna ukwazi ifayela le- izinganekwane zaseSeville, sizokutshela ezinye ezithakazelisa kakhulu.
1 Indaba kaSusona omuhle
2 UDoña María Coronel namafutha abilayo
3 Inhloko yeNkosi uPedro I, umuntu ovelele ezinganekwaneni zaseSeville
4 Indoda yamatshe
5 Umlando wePuppy, owakudala phakathi kwezinganekwane zaseSeville
6 Inganekwane kaCalle Sierpes
Indaba kaSusona omuhle
Umlando wedolobha onodlame uvela kule ndaba okuyingxenye yezinganekwane zaseSeville. Emuva eNkathini Ephakathi, kwaba nokuhlaselwa engxenyeni yamaJuda yaseSeville futhi, ekuphenduleni, amaJuda enza uzungu namaMoor ukuze alawule idolobha.
Ukuhlela uhlelo, bahlangana endlini yasebhange UDiego Susón, ondodakazi yakhe yayidume ngobuhle bayo yonke indawo. Kwabizwa USusana Ben Susón futhi wayenze ubudlelwano obuyimfihlo nomnumzane osemncane ongumKristu.
Njengoba uzungu lwalwakhelwe kwakhe, wayezibonela mathupha ukuthi luzoba yini. Inhloso bekuwukusoconga izikhulu zedolobha. Futhi yena, esaba impilo yesithandwa sakhe, wahamba wayomtshela ukuthi kwenzekani. Akazange abone ukuthi, ngokwenza njalo, wayefaka engcupheni umndeni wakhe nawo wonke amaJuda aseSevillian.
Umnumzane akazange athathe isikhathi eside ukuthi axwayise iziphathimandla ngaleli zungu, elayalela ukuthi kuboshwe abaholi baleli tulo, kubalwa nobaba kaSusona. Balengiswa izinsuku ezimbalwa ku I-Tablada, indawo okwabulawelwa kuyo izigebengu ezimbi kakhulu edolobheni.
USusona umelwe ngothayela epaki iMaría Luisa eSeville
Le ntokazi yalahlwa ngabantu bakubo, ababeyithatha njengembuka, futhi nomnumzane eyayinobudlelwano nayo. Futhi, kusuka lapha, inganekwane inikeza izinhlobo ezimbili. Ngokusho kowokuqala, wacela usizo kumbhishobhi omkhulu wesonto elikhulu, UReginaldo waseToledo, owamkhulula futhi wangenelela ukuze athathe umhlalaphansi esigodlweni sezindela. Ngakolunye uhlangothi, owesibili uthi unezingane ezimbili nombhishobhi futhi, ngemuva kokwaliwa nguye, waba ngumthandi kasomabhizinisi waseSevillian.
Kodwa-ke, le nganekwane iphinde ihlanganiswe ekugcineni kwayo. Lapho uSusona eshona, incwadi yakhe yefa yavulwa. Uthe ukufisa lokho ikhanda lakhe lanqunywa labekwa emnyango wendlu yakhe njengobufakazi bokuhlupheka kwakhe. Usabona nanamuhla, uma udlula kufayela le- ukufa street, ithayela elinokhakhayi obekuzoba ikhaya likaSusona. Eqinisweni, lowo mzila waziwa nangegama lentombazane.
UDoña María Coronel namafutha abilayo
Le nganekwane evela eSeville inezithako eziningi ze-opera yesepha, ikakhulukazi uthando nesifiso sokuziphindisela. Ngaphezu kwalokho, kusisa ezikhathini zokunqotshwa kabusha kwedolobha. UNkk Maria Coronel Wayeyindodakazi yentokazi yaseCastilian Mnu Alfonso Fernández Coronel, owayengumsekeli we U-Alfonso XI waseCastile. Waphinde washada don Juan de la Cerda, owahlokoma phakathi kwabavikeli bendodana yakhe, UHenry II, lapho ebhekene nomfowabo wokutholwa UPedro I ukulandelana kwesihlalo sobukhosi.
Ngalesi sizathu, owokugcina wabulala uDon Juan de la Cerda washaqa yonke impahla yakhe, washiya umfelokazi wakhe eshaqekile. UPedro ngangingamazi mathupha, kodwa lapho embona, wayekhona ngothando naye. Kodwa-ke, uDoña María Coronel wayengazimisele ukuxhumana nomuntu owayeyale ukubulawa komyeni wakhe futhi wangena esigodlweni seSevillian Santa Clara.
Noma kunjalo akazange athole uPedro I, obizwa nangokuthi "Unonya," ukuthi ayeke umzamo wakhe wokuba nesancinza. Kuze kwaba lusuku olulodwa, edinwe yi-regalker yakhe yasebukhosini, wangena ekhishini lezindela futhi kwakuthelwa uwoyela obilayo ngaphesheya kobuso ukuyonakalisa. Ngale ndlela wakwazi ukuthola uPedro I ukuze amshiye yedwa.
Isigodlo seSanta Inés
Wayesakwazi ukubona ukufa kwenkosi ezandleni zomfowabo omncane u-Enrique II, owabuyisa izimpahla ezazithathiwe kodade baseCoronel ngokuhlala ethembekile emsebenzini wabo. Ngakho-ke, laba besifazane ababili bakwazi ukuthola i- Isigodlo seSanta Inés esigodlweni esasikade sikayise. Ukweqa kokuqala kungaba, impela, uDoña María Coronel, owafa cishe ngo-1411.
Inhloko yeNkosi uPedro I, umuntu ovelele ezinganekwaneni zaseSeville
Ngokuyikho inkosi yesiCastilian enonya nayo ibuye igcwale kwezinye izinganekwane eziningi zaseSeville. Isibonelo, lena esizokuxoxela yona. Ngesinye sezikhathi zokuhamba kwakhe ebusuku phakathi nedolobha, uPedro wahlangana Bala indodana kaNiebla, umndeni owawusekela UHenry II, njengoba sikutshelile ngomfowabo ongamzali. Izinkemba azizange ziphume isikhathi eside futhi isihluku sabulala enye.
Kodwa-ke, le duel yavuka isalukazi ukuthi walunguza ngesibani futhi, wethuka lapho ebona umbulali, wabuya wayozivalela endlini yakhe, ngaphandle kokuthi alahle isibani ayesiphethe phansi. Umzenzisi uPedro wathembisa umndeni kamufi ukuthi Nganginquma ikhanda lalabo abanecala ngokufa kwakhe futhi akudalule emphakathini.
Ngokwazi ukuthi ubonwe yisalukazi, wasibizela phambi kwaso ukuze asibuze ukuthi ngubani isigebengu. Owesifazane wabeka isibuko phambi kwenkosi wathi "unombulali lapho." Ngemuva kwalokho, uDon Pedro wayala ukuba kunqunywe ikhanda esinye sezithombe zemabula ukuthi bamhloniphe nokuthi wabekwa ku-niche yokhuni. Ubuye wayalela ukuthi ibhokisi lishiywe kulo mgwaqo lapho kwenzeke khona lo mcimbi wodlame, kodwa lingavulwa kuze kube uyashona.
Nanamuhla uyasibona leso siphithiphithi emgwaqweni esibizwa, ngokunembile, Inhloko yeNkosi uDon Pedro. Futhi, ukukhumbula leli qiniso eliyindumezulu, kubizwa okuphambene nalokho, lapho bekuhlala khona ufakazi Umgwaqo weCandil.
Inhloko yeNkosi uDon Pedro
Siyaqhubeka eNkathini Ephakathi ukukhuluma ngale enye inganekwane yaseSeville. Kusitshela ukuthi, ngekhulu leshumi nanhlanu, kwakukhona indawo yokucima ukoma ku Umgwaqo omuhle wobuso, ezakhelene ne- San Lorenzo, lapho abantu bazo zonke izinhlobo bema khona.
Ngakho-ke, kwakuyisiko ukuthi, njengoba ISakramente elibusisiwe, abantu baguqa ngamadolo. Lapho iqembu labangane endaweni yokucima ukoma limuzwa esondela, baphuma baguqa njengoba udwendwe lwaludlula. Konke ngaphandle koyedwa. Ucingo UMateo «el Rubio» wayefuna ukuba ngumlingisi ophambili futhi, esola abangani bakhe ngokubusiswa, washo kakhulu wathi akaguqi.
Ngalo mzuzu, a imisebe yaphezulu wawela kuMateo ngeshwa ephendula umzimba wakhe waba ngamatshe. Ngisho nanamuhla ungabona isihlunu sendoda kulokho okokugqoka okugqokwa ukuhamba kwesikhathi kuBuen Rostro street, okubizwe kusukela lapho, Indoda yamatshe.
Umlando wePuppy, owakudala phakathi kwezinganekwane zaseSeville
Uma usuvele uvakashele idolobha lase-Andalusi, uzokwazi kahle ukuthi kubaluleke kangakanani kubahlali balo Umdlwane weTriana, igama ababhaphathize ngalo abantu UKristu Wokuphelelwa Isikhathi. Njalo ngeviki elingcwele ubuzalwane bakhe bumkhipha ngodwendwe kusuka esontweni lakhe elizungezwe yisimo esihle.
Ngakho-ke, akumangalisi ukuthi phakathi kwezinganekwane zaseSeville kunabaningana abanalesi sibalo njenge-protagonist. Enye yezinto ezithandwa kakhulu yilezo esizokutshela ngazo ngezansi.
Isitshela ukuthi umfana wamaGypsy ogama lakhe linembile Umdlwane Ngangidlula ibhuloho iBarcas nsuku zonke ngisuka eTriana, ngaleso sikhathi eyayiyindawo engaphansi kwedolobha, ngiye eSeville. Omunye wabantu abambona enza lolo hambo waqala ukusola lokho wayezovakashela unkosikazi wakhe uqobo. Okusho ukuthi, wayenobudlelwano benyama naye.
UChrist of Expression, owaziwa nge- "the Puppy"
Ngelinye ilanga, wamlinda eceleni kokuthengisa kukaVela wamgwaza amahlandla ayisikhombisa. Abantu abaningana beza lapho umfana ekhala futhi abakwazanga ukukugwema ukuhlaselwa. Phakathi kwabo kwakukhona umqophi UFrancisco Ruiz Gijón, ekugcineni abe ngumbhali wesibalo sikaChrist of the Expiration.
Kuthiwa yona, ishaqekile ngobuhlungu bale nsizwa, yagqugquzelwa ubuso bayo ukuba ibumbe le kaKristu odumile. Ngendlela, wayengeke avakashele unkosikazi wombulali, kodwa udade okwakungekho muntu owayazi ukuthi imihlangano yabo yayiyimfihlo.
Inganekwane kaCalle Sierpes
Lo mgwaqo ophakathi ungenye yezidume kakhulu eSeville, kepha akubona bonke abantu bakuleli dolobha abaziyo isizathu segama lawo, okubuye kube yinganekwane yaseSeville. Basho lokho, emuva ngekhulu le-XNUMX, kulokho okwakubizwa ngaleso sikhathi Espalderos street Izingane zaqala ukunyamalala ngaphandle kwesizathu.
Azange bezwakale futhi lesi simo esimangazayo sabangela ukwethuka phakathi kwezakhamizi zakule ndawo. Umphathi waleso sikhathi waseSeville, U-Alfonso de Cárdenas, ungazi ukuthi wenzeni. Kuze kube yilapho isiboshwa sinikela ngokuxazulula le mpicabadala ngenhloso yokuthola inkululeko yaso.
Era IMelchor de Quintana futhi wayesejele ngokubamba iqhaza ekuvukeleni inkosi. I-regent yamukela bese indoda elahliwe yamholela endaweni lapho kwakukhona i- inyoka enkulu cishe amamitha angamashumi amabili ubude. Sasinenkemba futhi sasifile. KwakunguMelchior uqobo owayeke wabhekana naye futhi wambulala.
Inyoka noma inyoka yaboniswa eCalle Espalderos ukuze kuqinisekiswe izakhamuzi zayo. Kuthiwa beza ukuzoyibona bevela kuzo zonke izindawo zasedolobheni futhi, kusukela lapho, umgwaqo wabizwa kweSierpes.
Ekuphetheni, sikukhombisile izinganekwane ezidume kakhulu zaseSeville. Kunabanye abaningi abafana ne- UKristu Wamandla Amakhulukwe ISanta Librada noma leyo Abangcwele uJusta noRufina. Kepha lezi zindaba zizoshiywa kwesinye isikhathi. Uma usedolobheni, jabulela. Siyakushiya kulesi sixhumanisi uhlu olunohambo ongalwenza usuka eSeville uma kwenzeka uba nesikhathi sokuhlola indawo ezungezile, ngeke uzisole!
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Spain amadolobha » Sevilla » Izinganekwane zaseSeville
9 ama-movie okufanele uwabuke ngaphambi kokuya eRoma